विराटनगर महानगरपालिकाभित्र धरापैधराप - www.biratsandesh.com
कुमार दाहाल विराटनगरका अहिले सम्मकै असफल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
आइसीसी वरियतामा पारस तल झरे, सोमपाल र वसन्त माथि उक्लिए
भाजेपुरबाट विप्लव समूहका ३ जना कार्यकर्ता पक्राउ
विराटनगर महानगरपालिकाभित्र धरापैधराप
प्रकाशित मिति : १३ असार २०७५, बुधबार १२:५९
विराटनगर, १३ असार । विराटनगर महानगरपालिकाभित्र यतिबेला जताततै धरापैधराप छ । कतिपयले व्यङ्ग्य गर्दै भन्ने गर्दछन् ‘महानगर होइन धुलोनगर, हिलोनगर र धरापनगर हो विराटनगर ।’ झट्ट हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ पनि । बिहान सकुशल निस्केको व्यक्ति बेलुका घर पुग्दा कि त जिउभरि धुलैधुलो हुन्छ कि त हिलैहिलो । अझ कतिपय व्यक्ति त लडेर जिउभरि घाउ लिएर पुग्छ घर ।
बुधबारमात्रै विराटनगर–११ पिचरा नगर छेउमा निर्माण भइरहेको कलर्भटबाट लडेर स्थानीय उपेन्द्र ढुंगेल घाइते भए । उनी मोटरसाइकलसहित कल्र्भटबाट झरेका थिए । तत्कालै ढुंगेलको उद्धार गरी स्थानीय रतन मेडिकलमा उपचार गरिएको थियो । “ठूलै भाग्यले बाँचें,” ढुंगेलले भने, “जताततै धरापैधराप छ ।” निर्माण भइसकेको लामै समय हुँदा पनि कल्र्भटमा माटो भरिएको छैन । जसका कारण सर्वसाधारण जोखिम मोलेर छेउको डेढ फुटे सडकबाट हिंड्न बाध्य छन् । दुर्घटनालगत्तै पुगेका वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले भोलि नै कलभर्ट पुर्ने बताए ।
केही समयअघि पाञ्चालीचोकमा बस पल्टियो । आधा दर्जन यात्रु घाइते भए । त्यसो त धरापमा पर्ने ढुंगेल मात्रै कहाँ हुन् र ? दुई हप्ताअघि सुनसरी झुम्काका अजय श्रेष्ठ बरगाछी दक्षिण निर्माणाधीन सडकमा मोटरसाइकलसहित पछारिए । उनको हात भाँचियो । विराटनगर–११ का अनिश घिमिरे स्कुटरसहित लडे नालामा । दाहिने हातमा चोट लाग्यो उनको । घिमिरे सामान्य घाइते भए । यी त केही उदाहरणमात्रै हुन् । दैनिक साना ठूला दुर्घटना भइरहेका हुन्छन् विराटनगरभित्रका सडकमा ।
निर्माणाधीन सडक प्रवेश गर्ने ठाउँमै महानगरले सूचना नराख्दा धेरै यात्रु धरापमा पर्ने गरेको विराटनगर–१२ का रामेश्वर यादव बताउँछन् । ‘यो सडक निर्माण भइरहेको छ फलानो सडकबाट जानुहोला’ भनेर सूचना राखिदिए सर्वसाधारणले सहज रुपमा यात्रा गर्ने नागरिक समाजका अगुवा रामबाबु दाहालको भनाइ छ । “अहिले त ठीकै छ अब वर्षा सुरु भएपछिको अवस्था के हुने हो,” दाहालले भने, “महानगरले कामलाई तीव्रता दिनै सकेन अझै ।”
महानगरले चारैतिर एकैपटक भत्काउँदा यात्रुका लागि धरापसिद्ध भएको छ विकास पनि । “कम्तिमा एउटा क्षेत्रको सडक निर्माण सम्पन्न गरेर भत्काउँदा राम्रो हुने थियो,” संयुक्त नगर टोल समन्वय समितिका संयोजक राजेश मास्के भन्छन्, “तर, यहाँ त काम देखाउन जताततै भत्काइएको छ । बनाउने काम सुस्त छ ।” महानगरमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको वर्ष दिन पुग्नै लाग्दा पनि जनताले महसुस गर्ने कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । खास गरी जनप्रतिनिधिहरू उद्घाटन, शिलान्यास र भ्रमणमै सीमित भएको उनको भनाइ छ ।
Keki Adhikari, Actress
आज गिरिजाप्रसाद कोईरालाको नवौं स्मृति दिवस
प्रदेश नम्बर १ को राजधानी बिराटनगर
प्रधानन्यायाधीशका लागि २ जनाको नाम सिफारिस
रेडियो, एफएम र टेलिभिजनका लागि बनेको विधेयक प्रमाणीकरण
विराटनगर १२ चैत । विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृत कुमार दाहाल हाल सम्मकै असफल...
काठमाडौं, १२ चैत्र । सरकारले पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाएपछि चन्द नेतृत्वको नेकपाले सरकार विरुद्ध आन्दोलन घोषणा...
भानु कलेजको १४ औं ब्याचलाई बिदाई कार्यक्रम
आईपीएल: मूम्बईलाई ३७ रनले पराजित गर्दै दिल्लीको राम्रो सुरुआत
चीनमा दुई तल्ले बसमा आगो लाग्दा २६ जनाकाे मृत्यु
Thapaliya recommended for EC Chief
प्रधानमन्त्री ओलीको संसदमा सम्बोधन: ‘सीके राउतसँगको सहमतिमा जनमत संग्रह उल्लेख छैन’
विराटनगर १२ चैत । विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृत कुमार दाहाल हाल सम्मकै असफल प्रशासक बनेको नगरबासीले आकलन गरेका...
अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथास्थानमा रहेको छ । नेपाली बलरद्वय सोमपाल कामी र बसन्त रेग्मीले भने...
शैक्षिक हड्तालको प्रभावले विराटनगरका शैक्षिक संस्था ठप्प
फरक शैलीका वडाध्यक्ष घनश्याम. जनताको सेवा र बिकास मेरो पहिलो प्राथमिकता
एमाले स्थायी कमिटी बैठक आज बस्ने
आईएसको आक्रमणमा ३६ सैनिक मारिए
लागुऔषध मुद्दामा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष यादव पक्राउ
विश्वकै सबैभन्दा वृद्ध मानिसको ११३ वर्षको उमेरमा निधन
Archives Select Month March 2019 (206) February 2019 (202) January 2019 (195) December 2018 (174) November 2018 (119) October 2018 (114) September 2018 (106) August 2018 (142) July 2018 (153) June 2018 (195) May 2018 (88) April 2018 (134) March 2018 (116) January 2018 (47)
Birat Sandesh Digital Online
Biratnagar-5, Chadani Chowk